KDE Plasma 5.23 Beta Inosvika neWayland Enhancements, Nharaunda Elements uye Zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
KDE Plasma 5.23 Beta inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, nharaunda mamiriro uye nezvimwe
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweiyo beta vhezheni ye kuti chichava chii KDE Plasma 5.23 iyo vhezheni yayo yakagadzikana zvinoenderana nekendari yakaburitswa ichave ichisvika muna Gumiguru 12 uye kuti pakati penyaya, shanduko uye zvigadziriso zvebug izvo zvatinogona kuwana zvinoratidzwa mune ino Beta vhezheni.
Pazvinhu zvitsva zvinoratidzika tinogona kuwana kodhi kugadzirisazve, kugadzirisa kuBreeze, pamwe nekuvandudzwa kwakasiyana siyana uye shanduko kune akasiyana zvikamu zvehurongwa.
KDE Plasma 5.23 Beta Makiyi Nyowani Zvimiro
Mune ino beta iyo inoiswa tinogona kuwana izvo muBreeze zvinhu menyu sarudzo, mabhatani esarudzo, zvinotsvedza, uye scroll scroll zvakagadzirwazve. Kuvandudza iko kushanda kwekubata nema touchscreen, Mipumburu yemabara uye mabara ekudzora akawedzerwa muhukuru. Chiratidzo chitsva chemutoro chakawedzerwa, chakagadzirwa muchimiro chegiya rinotenderera. Mhedzisiro yakaitwa inojekesa iwo majeti anobata kumucheto kwepaneru.
Imwe yeshanduko inomira pachena ndeye akagadzirisazve kodhi pamwe nekumisikidza iyo nyowani yeKickoff menyu, se kunatsiridza mashandiro uye kubvisa kukanganisa kwekukanganisa, Uye zvakare, mukana wekusarudza pakati pekuratidzira zvirongwa zviripo muchimiro cherondedzero kana gridhi remifananidzo zvinopihwawo, uye bhatani rakawedzerwa kunamira menyu yakavhurika kuchiratidziri. Pane zvekubata-bata, kubatirira bata zvino kwavhura mamiriro ezvinyorwa uye nekupa mukana wekugadzirisa bhatani kuratidza kweseshini manejimendi uye kudzima.
Kune rimwe divi iyo widget yekushanda pamwe ne clipboard inopihwa kuchengetedza zvinhu makumi maviri zvekupedzisira uye usaite hanya nenzvimbo dzakasarudzwa idzo iko iko kopi kushanda kusati kwaitirwa zvakajeka. Izvo zvinokwanisika kudzima izvo zvakasarudzwa zvinhu pane clipboard nekudzvanya iyo Delete kiyi.
Tambien iyo interface yekumisikidza iyo system parameter yakagadziridzwa, Iyo Mhinduro peji rinopa chirevo cheruzivo rwese rwakambotumirwa kune KDE vagadziri, pamwe ine yakasarudzika sarudzo yekugonesa kana kudzima Bluetooth panguva yekupinda mushandisi.
Pane peji re login screen skrini, akawedzera imwe sarudzo yekufananidza kurongedzwa kwechisoPamusoro pekutsvaga kwekutsvaga kwekugadziriswa kuripo kwakagadziridzwa, mamwe mazwi akakosha akasungirirwa kumatanho. Pa peji yemamiriro ehusiku peji, zviziviso zvinopihwa zviito zvinotungamira mukuwana kune ekunze masevhisi enzvimbo. Rudzi rwekugadzika kwemavara rinopa kugona kudarika pamusoro peiyo base base muvara scheme.
Uye zvakare, mukati mekuvandudza pYeWayland, yakanyanya kuvandudzwa mashandiro esangano anomira kunze pamwe nekuitwa kweiyo kugona kunama kubva kubhodhibhodhi nepakati mbeva bhatani uye kushandisa dhonza uye kudonhedza interface pakati pezvirongwa zvinoshandisa Wayland uye inomhanya ichishandisa XWayland, pamwe nenyaya dzinoverengeka neNVIDIA GPU dzakagadziriswa.
Inoenderana skrini masisitimu eakawanda-macomputer setups pakati peX11 uye Wayland zvikamu.
Paunenge uchichinjira kune yepiritsi nzira, iyo systray mifananidzo inowedzerwa kuti iite nyore mashandiro kubva kumatehwe skrini.
Iwo maratidziro ekuratidzira zviziviso anopa rutsigiro rwekuteedzera mameseji kune clipboard uchishandisa iyo Ctrl + C kiyi mubatanidzwa.
Iyo applet ine yepasirese menyu kuitisa inotaridzika senge yakajairwa menyu.
Yakapa kugona kukurumidza kuchinjisa pakati pemaprofiles emagetsi: "kuchengetedza simba", "kuita kwakanyanya" uye "kurongeka kwakaringana".
Mune iyo system yekutarisa uye majeti kuratidza mamiriro eema sensors, kuratidzwa kweavhareji mutoro chiratidzo (LA, mutoro wepakati) unopihwa.
Iyo vhoriyamu yekudzora applet inoshandisa kupatsanura kwemaapplication anotamba uye anorekodha ruzha.
Wakawedzera kuratidzwa kwemamwe marongero pamusoro penzvimbo yazvino network mune network yekubatanidza kudzora widget.
Yakapihwa kugona kumisikidza manyore kumhanya kweiyo Ethernet kubatana uye kudzima IPv6.
Wakawedzera rutsigiro rwezvimwe zvinowedzerwa uye zvigadziriso zvekubatanidza kuburikidza neOpenVPN.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE Plasma 5.23 Beta inosvika pamwe nekuvandudzwa kweWayland, nharaunda mamiriro uye nezvimwe
OpenSSH 8.8 inosvika ichitaura zvakanaka kune ssh-rsa rutsigiro, kugadzirisa zvipembenene uye zvimwe
Wget2 2.0, yekutanga yakagadzika vhezheni yeuyu anotsiva Wget